Dolores Redondo ›blog yaJuan Herranz
Novel naDolores Redondo
3 akanakisa mabhuku naDolores Redondo
Muenzaniso wemunyori Dolores Redondo unopedzisira wave kurota kwemunyori chero upi zvake achiri kutanga. Akazvitsaurira kune mamwe mabasa ehunyanzvi, Dolores aigara achiwana iyo nzvimbo yezvinyorwa zvake zvidiki zvaizopedzisira zvave kutungamira kumabasa makuru seBaztán trilogy yake ... Matangiro akaita seavo vakawanda uye vazhinji ...
Chiso chekuchamhembe chemoyo, naDolores Redondo
Ngatitangei kubva kumashure kwenyaya iyi. Uye chokwadi ndechekuti mavara anotambudzwa anogara achiteedzera kune icho chikamu chemuverengi chinovabatanidza kune avo vekare zvakapfuura; nezvikanganiso kana kushungurudzika izvo kusvika padanho rakakura kana padiki zvinoita kunge zvinoratidzira zvakanyanya kuguma kwehupenyu. Pamusoro…
Ini ndichakupa zvese izvi, naDolores Redondo
Kubva pamupata weBaztan kuenda kuRibeira Sacra. Urwu ndirwo rwendo rwekuburitsa nguva kwaDolores Redondo kunotungamira kune ino novel: «Zvese izvi ndichakupa». Nzvimbo dzakasviba dzinoenderana, nerunako rwemadzitateguru avo, marongero akakwana ekuratidzira mavara akasiyana asi ane hunhu hwakafanana. Mweya inotambudzwa ...
Muchengeti asingaoneki, naDolores Redondo
Amaia Salazar muongorori wemapurisa uyo anodzokera kumusha kwake kweElizondo kuti aedze kugadzirisa nyaya yakashata yekuuraya. Vasikana vechidiki munzvimbo iyi ndivo vakanyanya kunangwa nemhondi. Sezvo rangano richifambira mberi, tinoona Amaia akasviba apfuura, zvakafanana ne ...